Ny pejy fandefasana jiro dia misintona sy miloko maimaim-poana
Ny jiro dia iray amin'ireo trano izay malaza amin'ny ankizy amin'ny fandokoana. Satria miaraka amin'ny tranobe misy jiro ianao dia mampifandray traikefa nahafinaritra amoron-dranomasina, tantara mahafinaritra na fahatsiarovana fialantsasatra mahafinaritra.
Boky fandokoana jiro
Na izany aza, zava-dehibe hatrany ny fanaovana ireo pejy fandokoana amin'ny fomba ankafizin'ny ankizy. Miorina amin'ny fomba tsotra sy mazava. Io ihany no fomba ahafahan'ny ankizy mankafy fandokoana. Ny fanindriana ny iray amin'ireo sary dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny maodely fandokoana tsirairay avy:
Lighthouse ho an'ny fandokoana
Tora-pasika misy jiro
Lighthouse misy trano fonenana
Fanilo amin'ny alina
Lighthouse misy trano
Lighthouse misy rahona
Lokoy ny jiro
Jiro jiro pejy fandokoana amoron-dranomasina
Lighthouse pejy fandokoana - tranobe